Mandehana any amin'ny JWELL, fifandraisana mivantana, serivisy amin'ny fo - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Midira ao amin'ny JWELL, serasera mifanatrika, fanompoana am-po
Fotoana: 2019-05-24 Hits:
Andro faha-3 amin'ny fampirantiana
Hafanana, hafanana, hafanana, fientanam-po, hafanam-po ... Ity no tena fanehoana ny sehatry ny fampirantiana volo sy plastika iraisam-pirenena Chinaplas2019. Tamin'ny 23 Mey, andro fahatelo tamin'ny fampirantiana Chinaplas2019, dia mbola mafana fo hatrany ireo mpampiranty, mitombo hatrany hatrany ny fironana mahery vaika, ary mafana be ny tranokala.
Ao amin'ny vahoaka, ny tranoben'ny jinwei, miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra tsara sy serivisy tena tsara, dia mbola manintona mpitsidika maro ho tonga hifampidinihana sy hifampiraharaha.Ny laza malaza, ny serivisy akaiky, ny vokatra manankarena ho an'ny mpanjifa dia namela fahatsapana lalina.
Trano Jinwei ho toy ny sehatry ny vokatra, sy ny namana bebe kokoa hifampiresahana, hisarika ny sain'ny mpanjifa bebe kokoa, ny Jinwei booth dia mitondra mpanjifa tsy fiaraha-miasa amin'ny orinasa ihany, fa toy ny namana ihany koa, mipetraha, mifampiresaka, mifampiresaka, mifanakalo hevitra, mankafy ny traikefa farany omenay ny mpanjifa!
Mandehandeha ao amin'ny booth of jinwei, dia ho hitanao ny fanazavan'ny marary momba ny mpiasa eo an-toerana, ny fitarihana tsara avy amin'ny mpiasa teknika ary ny tsiky malazan'ny mpiasa logistics, mba hahafahan'ny mpanjifa mitsidika mahatsapa tsara kokoa ny vokatray.
Fohy foana ny fotoana tsara, ny fampirantiana Chinaplas2019 ihany no andro farany, raha mbola tsy tonga eo amin'ny trano heva ianao dia mbola miandry anao amin'ny toerana taloha (boite 1.1f01) ny milina jinwei, mihaona ary!
HIVERINAJwell PEEK PPSU POM Sheet Rod Extrusion Line
NEXTTamin'ny andro faharoa tamin'ny fampirantiana dia samy nitsiky tamim-pifaliana ny rehetra